Dajisaa Generator, Qaybo ka mid ah qaybaha Generator-ga ah - Noocyadaada oo kale
5kw matoor naaftada leh Patent-ka Hal abuurka, Naqshadeynta Patent-ka iyo Sawaxanka wuxuu ka hooseeyaa 70db (7m), dabeecadda ugu weyni ma lumineyso awood xitaa kadib hawlgal dheer kadib, waxayna qaadatay 100% silsilad naxaas beddel ah iyo ogaanshaha qeybaha dayactirka ayaa aad u adag Marka laga hadlayo dayactirka fudud, waxaan toos ugu beddeli karnaa burushka kaarboon ka baxsan. Hal weel ayaa xamuul ah 144 nooc. waxa intaa dheer, waxay leedahay 360 ° giraangiraha rogrogmada, way dhaqaaqi karaan bilaash. Taarikada zinc-ga ee sare lagu rakibay gudaha iyo banaanka haanta shidaalka hubi inaysan ka dillaacin naaftada.
Nooca aamusnaanta koronto-dhaliye naaftada ah oo leh qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka qaab-dhismeedku waa heer-kul hooseeya iyo dammaanad buuq Aslo badalahu waa 100% silig naxaas ah. Waxaan qaadaneynaa taangiga ugu sarreeya ee zinc-ga oo leh 8 saacadood oo isdaba joog ah. Dabeecada warqadda miiraha hawada waa Kuuriya laga soo waariday. Maxaa intaa ka sii badan oo aan u isticmaalno heerka 8-aad ee xarkaha naxdinta leh. Iyo meesha forklit horay loo dhigay (moodeel la sameeyay) si loo damaanad qaado si fudud adeegga iibka kadib.
Jaangooyaha nooca Trailer-ka ayaa leh waxqabad hooseeya oo qaylo hooseeya iyo xadka sawaxanka waa 75dB (A) (1m meel un ka fog cutubka). Qalabka gaashaaman ee lakabyada isku dheelitiran la'aanta daboolka dahaadhka dhawaaqa. Iyo nooca yareynta dhawaqa wax ku oolka ah ee qaadashada iyo qiiqa badan, marinnada iyo hawo-mareenada hawada, si loo hubiyo waxqabadka ku filan ee cutubka. Waxaan u isticmaalnaa aamusnaanta isku-dhafan ee balaaran iyo shidaal karti badan oo gubi kara. Waxaa intaa dheer, saxanka gaarka ah ee furitaanka dhaqsaha leh ee dhaqsaha badan ayaa aad u fudud dayactirka.
Matoor dhaliyaha ileyska iftiinka oo lagu rakibay naqshad kooban oo la qaadan karo.it waa mid aad u fudud in lagu maareeyo hal hawl wade. Ku habboon meelaha shaqada ee yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Qaado naqshad qaabdhismeed badan oo naxdin leh, waxqabadka ka hortagga shoogga oo aad ugu kalsoonaan karto jawiga naxdinta leh ee soo noqnoqda badan. Ku habboonaanta elektromagnetic-ka oo aysan u horseedi karin faragelin shabakadda gudbinta; Nalalka oo dhan waxay korsadaan alaab bir ah oo tayo sare leh oo la soo waarido, tayo sare leh oo la isku halleyn karo oo si fiican uga shaqeysa deegaanka adag.
AWOODAADA LIKE AWOODDA (FUZHOU) CO., LTD., Waa mid ka mid ah soosaarayaasha OEM ee wax ku oolka ah ee Shiinaha ku soo uruuriya naqshadda horumarinta, soosaarka iyo iibinta mid, oo in ka badan 30 shatiyeyaal ah, kuna takhasusay soo saarista qalabka koronto-dhaliyaha iyo qalabkeeda , Oo leh in ka badan 30 sano oo khibrad wax soo saar ah oo lagu taageerayo qaybaha .Shirkadu waxay leedahay qalab wax soo saar oo horumarsan iyo habraacyo tijaabo oo dhameystiran, waxay leedahay koox xirfadlayaal tayo sare leh iyo farsamo leh, waxayna leedahay awood hal-abuurnimo Wax soo saarka ugu muhiimsan waa 1-5 koronto-dhaliye qaboojiyeyaal ah iyo 10-2000 kw koronto-dhaliye biyo-qaboojiye ah